एकदमै दुब्लो, पातलो र कमजोर हुनुहुन्छ ? यी चीज खाईदिनुस्, ५ दिनभित्र आफैँ हेर्नुस् चमत्कार ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/एकदमै दुब्लो, पातलो र कमजोर हुनुहुन्छ ? यी चीज खाईदिनुस्, ५ दिनभित्र आफैँ हेर्नुस् चमत्कार !
भाग्यमानिले मात्र देख्ने जिउदो दुर्लभ यो सङखको दर्शन गरी यसको महिमा पढी सेयार गर्नुहोस